Ukulingana Ekufinyeleleni Komuthi Wokulwa namaQhawe Ezokuvakasha Omhlaba
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Ukulingana Ekufinyeleleni Komuthi Wokulwa namaQhawe Ezokuvakasha Omhlaba
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • I-Saudi Arabia Breaking News • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha • Wtn
Ukungalingani ekufinyeleleni kumuthi wokugoma i-COVID-19 kungavimbela ukuthuthukiswa komnotho kuyo yonke imikhakha. AbakwaSaudi Arabia nabaHoli Bezokuvakasha Emhlabeni bayakuqonda lokhu. I-FII iyeza ngesonto elizayo, futhi amehlo omhlaba abheke eRiyadh.
Ikusasa Lokutshalwa Kwezimali (FII) selizohlangana eRiyadh. Ezokuvakasha kulokhu zizoba nengxenye enkulu engxoxweni yabaholi bezokuvakasha emhlabeni jikelele.
The Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba Uhlelo lwezempilo ngaphandle kweMingcele lukhumbuza iSaudi Arabia nezithunywa zayo ezivela emhlabeni wonke ukuthi ezokuvakasha ngeke zisebenze size siphephe sonke.
Ukutholakala komuthi wokugoma akulingani emhlabeni. Ngenkathi amanye amazwe acebile enemithi yokugoma eningi kakhulu, amazwe anenhlanhla encane afuna kakhulu ukuthi izakhamuzi zawo zigonywe. Ukuchuma kwamanga amaningi kuhlobene nokuhamba nezokuvakasha.
Kusukela ngo-Okthoba 17, e-United States, ama-65% wabantu asethole okungenani isibhamu esisodwa sokugoma i-COVID-1, abanye manje sebethola i-19rd booster shot.
Ama-30% abantu baseMelika bayenqaba ukugoma. Uhulumeni uhlinzeka ngezikhuthazo kulabo abathobela “izincomo” zokugoma kanti ngasikhathi sinye usabisa labo abangahambisani nezinhlawulo, njengokulahlekelwa yimisebenzi noma ukuthola izindawo zokudlela.
ESingapore, isilinganiso sokugoma singama-80%, eChina ama-76%, eJapan ama-76%, eJalimane ama-68% enabantu abaningi abenqabayo, iSaudi Arabia 68%, i-UAE 95%, i-Israel 71%, ne-India 50%, nomhlaba isilinganiso manje kuma-48%.
Manje isimo siya ngokuba nzima. I-Russia ine-35% yabantu bayo kuphela egonyiwe, iBahamas 34%, iNingizimu Afrika i-23%, i-Jamaica i-19% kanti isilinganiso e-Afrika siyi-7.7% kuphela.
I-African Tourism Board, ngaphansi kobuholi bukaSihlalo uCuthbert Ncube, ijoyine uhlelo lwe-WTN lwezeMpilo Ngaphandle Kwemingcele kusukela ngomzuzu wokuqala. Kanjalo noDkt Taleb Rifai, owayenguNobhala Jikelele we-UNWTO.
UNobhala Wezokuvakasha waseKenya uNajib Balala wayekhona omunye wabaholi bokuqala base-Afrika abasekela uhlelo lwezeMpilo ngaphandle kweMingcele olwenziwa yi-WTN. Manje ungungqongqoshe wokuqala wase-Afrika ephendula umfutho kaMengameli wase-United States uBiden wokuyekelela amalungelo obunikazi womuthi wokugoma i-COVID-19.
Akukho ukwenqaba emazweni anezinga eliphansi lokugoma; kunesifiso sokuthola imithamo eyanele yokuletha umuthi kubantu. Kukhona ukuntuleka kwezinsizakusebenza zezezimali eziguqula umuthi wokugoma ikakhulukazi emazweni acebile.
Abaholi bezokuvakasha abanomqondo womhlaba wonke, kubandakanya uNgqongqoshe Wezokuvakasha uBartlett waseJamaica, babe negalelo elikhulu ekwaziseni lesi sikhundla kanye neqhaza elibanjwa yiSaudi Arabia njengomdlali ophambili emhlabeni.
Nge-FII ezayo eRiyadh, kanye nabaholi bezokuvakasha abayi-1,000 XNUMX ezindizeni manje abazofika eSaudi Arabia futhi bazothamela, uNgqongqoshe okhulumayo uBartlett angadlala indima ebaluleke kakhulu njengomholi womhlaba wonke eRiyadh ngesonto elizayo. Ukulingana kwemithi yokugoma kungaba phezulu emqondweni wakhe, uma kubhekwa ukuthi ezokuvakasha zaseJamaica zithinteke kakhulu.
I-World Tourism Network, ngaphansi kobuholi boMsunguli uJuergen Steinmetz, ikubonile lokhu ezingxoxweni zayo zomhlaba ezingeni lokuqala futhi yaqala lolu hlelo Impilo Ngaphandle Kwemingcele ekuqaleni konyaka ukukhumbuza umhlaba ukuthi akekho umuntu ozophepha ku-COVID kuze kube yilapho wonke umuntu ephephile.
Kukhona inqubekelaphambili eseyenziwe kepha ngokudabukisayo kulesi sigaba esiwubhadane, ukungalingani kwemigomo kuyaqhubeka, noma ngabe kunemithamo yemithi yokugoma engaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha esatshalaliswa emhlabeni wonke. Iningi lala lisemazweni ahola kakhulu kanti amazwe ampofu kakhulu agonywe ngaphansi kwephesenti elilodwa labantu bawo.
UNgqongqoshe Wezokuvakasha waseJamaica, uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett, naye owathola isicoco se- IQhawe Lezokuvakasha Lomhlaba Wonke, uyakwazi lokhu futhi wakhumbuza eTurboNews ukuthi ukungalingani komuthi wokugoma kungavimbela ukululama komhlaba.
Emhlanganweni weKomidi Lezokuvakasha (i-CITUR), uBartlett wazise ngamasu kahulumeni waseJamaica nemizamo yakhe yokunciphisa umthelela omubi wobhadane emkhakheni wezokuvakasha.
Nini Umhlaba Wezokuvakasha ubiza u-911, Umbuso waseSaudi Arabia ubekhona ukuphendula nokusiza. Kunikezwe izigidigidi zamaRandi ezizotshalwa kulo mkhakha, hhayi eKSA kuphela kepha nasemhlabeni jikelele. UNgqongqoshe Wezokuvakasha wase-Saudi Arabia, uMhlonishwa uMnu u-Ahmed Aqeel Al-Khateeb, waqasha owayeyi-CEO ye-WTTC kanye noNgqongqoshe Wezokuvakasha eMexico, uGloria Guevara, njengomeluleki wakhe omkhulu. UGloria uyayiqonda indawo yezwe futhi ujwayelene kahle nesimo sezomnotho esincike kwezokuvakasha, njengeCaribbean.
ISaudi Arabia isengazama ukuletha ikomkhulu le-UNWTO lisuka eMadrid lize eRiyadh. Isiphakamiso esinjalo kuMhlangano Jikelele we-UNWTO eMorocco sisengathunyelwa. Okungenani, iSaudi Arabia yayifinyelele eSpain, izwe lamanje elibamba i-UNWTO, ukuze bakwazi ukusebenza ndawonye babuyise ubuholi kwiNhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba ekhubazekile.
I-future Investment Institute ezayo ilungiselela ukuhlangana eRiyadh ngesonto elizayo. UMnyango Wezokuvakasha waseSaudi wamema amakhulu abaholi bezokuvakasha ukuthi babe yingxenye yalo mhlangano.
Ukungalingani ekugomeni umhlaba wonke empeleni kuyingozi ekuvulekeni kabusha kwenqubekela phambili yalo mkhakha, ekuthuthukisweni kwemisebenzi, nasekuchumeni.
Abahambi abagonyiwe cishe bazokhetha indawo lapho abasebenzi basehhotela nabanye abasebenzi bezokuvakasha begonywa khona. Okufanayo kuya ngenye indlela. Abasebenzi basehhotela bafuna ukuqinisekisa ukuthi baphephile futhi bayagonywa. Abafuni ukuxhumana nezivakashi zakwamanye amazwe uma zingagonyiwe.
Uma ngenxa yezizathu zezezimali izwe lingenazo izinsiza kanye nokutholakala komuthi wokugoma, lesi yisimo umphakathi wezokuvakasha womhlaba wonke ongahlangana futhi usizane ngaso. ISaudi Arabia ingadlala indima yayo njengomholi osanda kusungulwa womhlaba wonke onomqondo ovulekile futhi omusha, ukwenza lula nokwengeza ukuxhasa ngemali kulolo hlelo. ISaudi Arabia izovela njengeqhawe lomhlaba uma iphumelela.
Ukutshalwa kwezimali okunjalo ekufinyeleleni ngokulinganayo kwemithi yokugoma nakanjani kungaba namandla okukhokhela iSaudi Arabia ngemigomo ephakathi.
Umhlangano we-FII, ngakho-ke, uya ubaluleka ngokwengeziwe ngosuku.